Ogaden News Agency (ONA) – Hogaamiyaha Kurdistan Ciraaq oo Xilka Ka Degaya 1da Novembar.
Hogaamiyaha Kurdistan Ciraaq oo Xilka Ka Degaya 1da Novembar.
Posted by ONA Admin	/ October 31, 2017
Hogaamiyaha Ismaamulka Kurdida Ciraaq Mascuud Barsani ayaa shaaca ka qaaday inuusan markale u tartami doonin qabashada xilka Madaxweynaha oo kaga eg 1da November.
Mr. Barsani ayaa go’aankiisa u gudbiyey Baarlamaanka Ismaamulkaasi oo kalfadhi yeeshay, Golahaasi ayaa ah midka cusbooneysiin kara xilka uu hayey Mascuud Barsaani oo wakhtigiisa ku egyahay Arbacada soo socota. Taageerayaasha Barsani oo ay arrintan kadis ku noqotay ayaa banaanbax rabshado wata ka dhigay xarunta Baarlamaanka.
Go’aanka Barsani ayaa la xidhiidha xiisada ka dhalatay Aftidii uu maamulkiisa qabtay oo ay shacabka Kurdida intooda badan ku taageereen inay gooni uga go’aan dalka Ciraaq. Barsani ayaa hogaamiyaha Kurdida soo ahaa muddo 12 sano ah intuu xilka hayeyna maamulkaasi horumar gaadhsiiyay.
Hogaamiyaha Kurdida ayey muuqataa inay u cadaatay inuu heli waayey taageerada Beesha Caalamka ee aqoonsiga gooni isu taagooda, wuxuuna khudbadiisa ugu danbeysay ku sheegay in Kurdida aysan caalamka saaxiibo ku lahayn. Inkastoo Barsani uu wakhti badan galiyay himilada gooni isu taaga Kurdida ayaa hadana waxa muuqata in maamulkaasi uu caqabado badan kusoo wajahan yihiin.
Dowlada Dhexe ee dalka Ciraaq ayaa qaaday talaabooyin militari oo ay kula wareegtay qeybo kamid ah dhulkii muhiimka ah oo ay Kurdida gacanta ku dhigeen sanadihii lasoo dhaafay sida gobalka Kirkuk, waxayna xukuumada Baqdaad isbaheysi la sameysatay dalalka Turkiga iyo IRAN oo cadaadis xoog leh soo saaray maamulkaasi Kurdida oo ay dhaqaalihiisa ku xidhan yihiin labadaas dal ee jaarka la ah Ciraaq.